Trump: “Maalmaha Soo Socda Waxay Noqon Doonaan Kuwa Aad Iigu Adag” | Gaaroodi News
President Donald Trump: “We’ll be seeing what happens over those next couple of days”
Madaxeynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegaya in haatan xaaladiisu caafimaad wanaagsantahay balse maalmaha soo socda ay noqon doonaan kuwa aad ugu adag.
Muuqaal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu ku sheegay in caafimaadka marwada koobaad iyo kiisuba ay wanaagsan yihiin.
Dhakhtarka gaarka ah ee madaxweyne Trump ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee Trump ay sii wanaagsanaaneysay tan iyo markii lageeyay cisbitaalka milatariga ee Walter Reed.
Trump ayaa habeenkiisii labaad ku baryay cisbitaalka. Dr Sean Conley ayaa warbixin ku sheegay in weli kooxda caafimaadka ee madaxweynaha ay wanaagsantahay rajadooda ku aaddan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha.
Saacado ka hor muuqaalka madaxweynaha uu soo dhigay bartiisa Twitter -ka ayaa waxaa laga dheehan karay Trump oo xiran jaakat suut ah oo aanu wehlin taayga. Waxa uu u mahad celiyay dhakhaatiirta iyo kal-kaaliyeyaasha xarunta caafimaad ee Walter Reed.
“Halkan waxaan imid aniga oo ay xaaladaydu caafimaad wanaagsanayn balse haatan waxaan dareemayaa isbedel caafimaad,”ayuu yiri.
Maxaan kala soconaa xaalaladda uu Trump ku sugan yahay?
Subixii sabtida Dr Conley ayaa sheegay in aanan madaxweynaha lagu xirin qalabka lagu neefsado, 24-kii saacadood ee la soo dhaafayna aanay wax qandha ah qaban.
Waxaa la filayaa in madaxweynaha uu isbitaalka Walter Reed ku sii jiri doono “maalmaha oo socda” sida laga soo xigtay Aqalka Cad ee Mareykanka.
Dr Conley ayaa sheegay in rajadiisu ay wanaagsantahay balse uu jadwal u sameeyn doono qaabka madaxweynaha isbitaalka looga soo saarayo.
Hase yeeshee madaxa shaqaalaha ee Aqalka Cad Mark Meadows ayaa walaac ka muujiyay xaaladda madaxweynaha, waxa uuna sheegay ineysan weli jirin ifafaalo cad oo ku aaddan caafimaadkiisa.
Qoraalka Muuqaalka,Doctors looking after the US president said they’re “cautiously optimistic, but he’s doing great”
Covid ayaa halis gaar ah u lahaan kara madaxweynaha oo 74 sano jir ah aadna u cayilan. Waxaa ilaa iyo hadda lagu daweeyay dawo tijaabo ah oo loogu talagalay fayriska korona bals e aan wali la ansixinin.
Yaa kale oo madaxweynaha u dhowaa oo laga helay xanuunka?
Ka sokow Mr Trump iyo xaaskiisa, ugu yaraan shan qof oo kale oo ka qeyb galay xafladdii Rose Garden ayaa sheegay in laga helay cudurka – in kastoo aan la ogeyn halka iyo cidda qaadsiisay xanuunkan.
Dadkaasi waxay kala yihiin lataliyihii hore ee aqalka cad Kellyanne Conway, Senatarka laga soo doorto gobolka Utah Mike lee iyo Senator Thom Tillis oo matala gobolka North Carolina, labadooduba waxay qayb ka yihin guddiga garsoorka ee aqalka senateka. Waxaa kale oo cudurkan laga helay hogaamiyaha Jaamacadda Notre Dame, John Jenkins.